China 310s ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere rụpụta na Factory | Huaxiao
310 igwe anaghị agba nchara nwere dịtụ elu carbon ọdịnaya nke 0,25%, mgbe 310S igwe anaghị agba nchara nwere obere carbon ọdịnaya nke 0,08%, na ndị ọzọ na mmiri mmiri yiri. Ya mere, ike na ike nke 310 igwe anaghị agba nchara dị elu ma na-eguzogide corrosion ka njọ. Nguzogide corrosion nke 310S igwe anaghị agba nchara ka mma ma ike dịtụ ala. 310S igwe anaghị agba nchara bụ ihe siri ike na-agbaze ruru ka ya ala carbon ọdịnaya, otú ndị price bụ dịtụ elu.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 310s Hot akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere, 310s HRP, PMP
Obosara: 600mm - 3300mm, ngwaahịa ndị dị warara dịka ịlele na ngwaahịa
Pallet arọ: 1.0MT - 10MT
C: ≤ 0.08, Si: ≤1.5 Mn: ≤ 2.0, Cr: 16.00～18.00, Ni: 10.0～14.00, N: .00.03, P: ≤0.045 Mo: 2.0-3.0, N≤0.1
Achịkọta ọdịiche ndị a dị ka ndị a:
1. Ngwakọta kemịkal bụ 310. Ihe carbon bụ 0,15% na ihe 310S chọrọ bụ 0.08%. Na mgbakwunye, ọ chọkwara ka akụkụ MO dị obere ma ọ bụ hara nha 0.75%.
2. Elu ekwe ekwe n'elu okwu nke ike. 310 karịrị 310S
3. Nguzogide corrosion 310S karịrị 310 n'ihi na 310S na-agbakwunye MO
4. Igwe na-eguzogide okpomọkụ dị elu 310S nke otu ọnọdụ nhazi ahụ ka mma karịa 310
Morefọdụ ndị ọzọ dị iche n'etiti na-ekpo ọkụ akpọrepu na oyi na-atụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara
Site na nkọwa, ingots nchara ma ọ bụ obere ụgwọ siri ike nrụrụ na ọnọdụ okpomọkụ nkịtị ma sie ike ịhazi. N'ozuzu, ha na-ekpo ọkụ ruo 1100 ruo 1250 Celsius C maka ịgbagharị. A na-akpọ usoro ntụgharị a ikpo ọkụ ọkụ. A na-emegharị ọtụtụ steels site na ịgbanye ọkụ. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na elu nke ígwè ahụ na-adaba na ígwè oxide n'ọtụtụ dị elu, elu nke ígwè a na-ekpo ọkụ na-adị njọ ma nha na-agbanwe nke ukwuu. Ya mere, ígwè na-eji ire ụtọ elu, ezi size na ezi n'ibu Njirimara a chọrọ, na-ekpo ọkụ-akpọrepu ọkara okokụre ngwaahịa ma ọ bụ okokụre ngwaahịa na-eji dị ka akụrụngwa na mgbe oyi na-atụ. Usoro ntụgharị.
Linggbagharị na okpomọkụ nkịtị na-aghọkarị ntụpọ oyi. Site na metallographic, njedebe nke ịtụgharị oyi na ịkpụgharị ọkụ ga-adị iche site na recrystallization okpomọkụ. Nke ahụ bụ, ịgbanye ala karịa recrystallization okpomọkụ bụ oyi Rolling, na Rolling elu karịa recrystallization okpomọkụ dị ọkụ Rolling. Steelgwè nwere recrystallization okpomọkụ nke 450 ruo 600 Celsius C.
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, dị ka aha ahụ na-egosi, nwere nnukwu okpomọkụ nke mpempe akwụkwọ a na-atụgharị, ya mere nguzogide nrụrụ dị obere ma nwee nnukwu nrụrụ nwere ike nweta. Na-ewere Rolling nke nchara mpempe akwụkwọ dị ka ihe atụ, ọkpụrụkpụ nke na-aga n'ihu mgbatị oghere bụ n'ozuzu banyere 230 mm, na mgbe ike ike Rolling na rụchaa Rolling, ikpeazụ ọkpụrụkpụ bụ 1 ka 20 mm. N'otu oge ahụ, n'ihi ntakịrị obosara-na-ọkpụrụkpụ nke efere ígwè, akụkụ ziri ezi nke akụkụ chọrọ dịtụ ala, nsogbu nsogbu adịghịkwa mfe, na a na-ejikwa convexity na-achịkwa. Maka ihe ndị chọrọ nke nzukọ ahụ, a na-enweta ya site na ịpịgharị na njikwa a na-achịkwa, ya bụ, ịchịkwa okpomọkụ na-agagharị, mechaa ikpo ọkụ na ikpochapu okpomọkụ nke ịmecha ngwụcha iji chịkwaa microstructure na n'ibu Njirimara nke warara.
Rollkpagharị oyi, n'ozuzu ya enweghị usoro kpo oku tupu ịgbagharị. Agbanyeghị, n'ihi ntakịrị ọkpụrụkpụ nke warara ahụ, ọdịdị nke efere na-adịkarị mfe ime. Ọzọkwa, mgbe ị tụgharịrị oyi, ọ bụ ngwaahịa emechara, yabụ, iji chịkwaa akụkụ ziri ezi na ogo elu nke warara ahụ, a na-arụ ọtụtụ usoro mgbagwoju anya. Oyi Rolling mmepụta akara bụ ogologo, na akụrụngwa dị ọtụtụ, na usoro bụ mgbagwoju anya. Dika ihe onye choro choro maka izi ezi nke udiri, odidi na ogo elu nke ihe di nma, ihe nlere anya, usoro L1 na L2, na uzo ichota ihe eji eme ihe otutu. Ọzọkwa, ọnọdụ okpomọkụ nke na-apụta na warara bụ otu n'ime ihe nchịkwa akara njikwa dị mkpa.
Ngwaahịa a na-atụgharị oyi na mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ dị iche na usoro gara aga na usoro ọzọ. Ngwaahịa a na-ekpo ekpo ọkụ bụ akụrụngwa nke ngwaahịa akpọrọ akpọrọ akpọrọ akpọrọ, a na-arụkwa igwe igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. Igwe na-agbagharị, na-akpụgharị, bụ nke a na-akpụzi, tumadi iji tụgharịa akwa mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ na mpempe akwụkwọ oyi na-atụ oyi, na-abụkarị 0.3-0.7mm site na ịpịgharị na-agbanye ọkụ nke 3.0mm. Nzuzo akpọrọ akpọrọ, ụkpụrụ bụ isi bụ iji ụkpụrụ extrusion mee ka nrụrụ gbanwee
Nke gara aga: 309 na-ekpo ọkụ igwe anaghị agba nchara
Osote: 316L 316 Hot akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere